Nayakhabar.com: प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुअघि संसदभित्रै कोसँग कुरा गरे प्रचण्डले सुनिलबहादुरको मोबाइलमा ? हेर्नुस् तीन फोटोमा
प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुअघि संसदभित्रै कोसँग कुरा गरे प्रचण्डले सुनिलबहादुरको मोबाइलमा ? हेर्नुस् तीन फोटोमा
काठमाडौं । सोमबार दिउँसो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए।
संसदबाट दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुअघि मतदान जारी रहँदा प्रचण्डले राप्रपा सांसद् सुनिलबहादुर थापाको फोनबाट हँसिलो मुख बनाएर हाउभाउसहित कुराकानी गरेको दृश्य धेरैले टेलिभिजनबाट ‘लाइभ’ देखे।
दाहालले फोनमा कोसित कुरा गरे भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको थियो। पत्रकारहरुमाझ पनि उनले कोसँग कुराकानी गरे भनेर चर्चा भयो। प्रधानमन्त्री हुनै लागेको व्यक्तिले निर्वाचित भएको घोषणा हुनु अगावै गरेको कुराकानीलाई धेरै आआफ्नै बुझाई अनुकूलका व्याख्या गरे। तर उनको त्यो फोन धेरैले गरेको व्याख्याभन्दा फरक थियो।
संसदमा मत विभाजन सुरु हुने बित्तिकै प्रचण्डले सुरुमै उम्मेद्वारीका पक्षमा हस्ताक्षर गरे र फर्कने क्रममा भेटिए जतिसँग हात मिलाउँदै फर्किए। जब उनी आफ्नो आसन नजिक पुगे त्यतिबेला सुनिलबहादुर थापाले उनलाई आफ्नो फोन थमाए। दाहालले हसिलो मुद्रामा करिब एक मिनेटसम्म कुराकानी गरे।
प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि प्रचण्डले मिडियालाई ल्होत्से हलमा बोलाएर हात हल्लाएर अभिवादन गरे। बाहिर निस्किएर पनि उनले मिडियालाई केही प्रतिक्रिया दिएनन्।
फोनबारे जानकारीका लागि एउटा व्यक्ति खोज्नै पर्ने भयो सुनिलबहादुर थापा। उनलाई संसद्बाट बाहिरिँदै गर्दा भेट्ने मौका पायौँ। प्रश्न सोधिहाल्यौँ, ‘प्रचण्डलाई कोसँग कुरा गराउनुभएकोरु’
उनले सहज जवाफ दिए ‘पशुपतिशमशेर जबरासँग।’ हामी केही अल्मलिएको जस्तो भान सुनिलबहादुर थापालाई परेछ।
उनले फेरि भने, ‘तपाईँलाई पत्यार लागेन ररु लु मेरो डायल लिस्ट हेर्नुस्।’
त्यसमा हेर्दा पशुपतिशमशेर नै लेखिएको थियो।